noble - Synonyms of noble | Antonyms of noble | Definition of noble | Example of noble | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for noble
Top 30 analogous words or synonyms for noble
နိုဘယ်ဂက်စ် Noble gas များသည် အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်သော အခြေအနေများ အောက်တွင် မှလွဲ၍ ပုံမှန်အားဖြင့် ဓာတ်ပြုသတ္တိနည်းကြ၏။ Noble gas များ၏ ဓာတ်ပြုသတ္တိ နည်းခြင်း (အစွမ်းမဲ့ခြင်း)သည် ဓာတ်မပြုစေချင်သော နေရာများတွင် အသုံးချရန် အလွန် သင့်လျော်စေသည်။ ဥပမာ: အာဂွန်ကို လျှပ်စစ်မီးလုံးများတွင် ပူနေသော အဖြိုက်နက် tungsten နန်းကြိုးကို ဓာတ်တိုးစေခြင်းမှကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ဟီလီယမ်ကို ရေနက်ရေငုပ်သမားများအားရှူစေသည်။
ထေရဝါဒ နှင့် မဟာယာန (2) The Four Noble Truths are exactly the same in both schools.
နီယွန် နီယွန် သည် ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်္ကေတမှာ Ne ဖြစ်ကာ အမ်တမ်နံပါတ် ၁၀ ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် Noble gas တွင်ပါဝင်ပြီး သာမန်လေထုဖိအား အပူချိန်အောက်တွင် အရောင်အဆင်း ကင်းမဲ့သည်။ လေထုသိပ်သည်းဆ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ ရှိသည်။
ဉာဏ်စဉ် ၁၆ ပါး (၁၀) အနုလောမဉာဏ် (လျော်) - လက္ခဏာသုံးပါးကို ရှုသည်၏အဖြစ်ဖြင့် မဂ်အားလျော်စွာရသော သတိပဋ္ဌာန်စသော ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇) ပါးတို့အားလျော်စွာ ဖြစ်သောဉာဏ်။ Anuloma Nana (Knowledge which conforms to the Four Noble Truths)
ဂျွန် ဖရက်ဒရစ်ခ်ဆန် ယခုအခါတွင် သူသည် ရေနံသင်္ဘောအစီး ၇၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာတွင် ရေနံတင်သင်္ဘောအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီး ရေနံတူးဖော်ခြင်းနှင့် ငါးမွေးမြူကန်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာထားရှိသည်။ သူ၏သင်္ဘောအုပ်စုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အရ ပိုမိုလုံခြုံသော ရေနံသင်္ဘောဖြစ်သည့် ကမ်းရိုးတန်းသင်္ဘောကြီး၏ လွှမ်းမိုးမှုကိုခံခဲ့ရသည်။၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် သူအုပ်ချုပ်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည့် Seadrill သည် Stavanger နည်းဖြင့် ရေနံတူးဖော်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Smedvig ကိုလေလံဆွဲမည်ဟု ကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်ကတည်းက အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Noble ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် လေလံပြိုင်ဆိုင်မှုများ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဓမ္မပဒ 22. Those who, withaclean mind have seen this truth, those who are wise and ever-watchful, they feel the joy of watchfulness, the joy of the path of the Noble Ones (Ariyas).
ဂျွန် ဖရက်ဒရစ်ခ်ဆန် သို့သော် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Seadrill သည် Smedvig ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့်ပင် ကုမ္ပဏီ၏စီမံခွင့်ကိုရရှိခဲ့သည်။ (မဲ ၅၁.၂၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရင်းနှီးငွေ ၅၂.၂၇ ရာခိုင်နှုန်း)။ Smedvig သည် နော်ဝေးငွေကြေး ၁၅ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိပြီး ဖရက်ဒရစ်ခ်ဆန် ၏ အကြီးဆုံးရောင်းဝယ်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အေပြီလတွင် Noble Corp က သူ၏ Smedvig ရှယ်ယာများကို Seadrill သို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ယခုအခါ Smedvig သည် Seadrill ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်သို့ လုံးဝကျရောက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိသျှသတင်းစာ The Daily Mail က ဖရက်ဒရစ်ခ်ဆန် သည် ပရီးမီးယားဘောလုံးအသင်းဖြစ်သော တော်တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကို ဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤကိစ္စ မတိုင်ခင်ထိ သူသည် Vålerenga I.F ၏ အဓိကပိုင်ရှင်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့သည်။